Adeerkay vs Adeerkaa: Maxaan xisbi ugu biiri waayay? Qalinkii:Mohamed Omar (Sammo) |
Adeerkay vs Adeerkaa: Maxaan xisbi ugu biiri waayay? Qalinkii:Mohamed Omar (Sammo)
Ugu dambayntii, maqaalkan yara dheeraday uma aan soo qorin in aan cid ku ceebeeyo ama cid ku faadh faadho, keliya waxa aan usoo qoray in aan guto waajib i saarnaa. Waajib kaas oo ahaa waajib Illaahay dusha iga saaray oo ah in wixii xun ee aad arkayso aadan ka aamusin. Waxa aan arkaana waa dhalinyaradii Somaliland oo u kala beratamaya sidii mid waliba adeerkii uga dhaadhicn lahaa dadka in uu yahay ka ugu wanaagsan ee la dooran karo. Dabcan qofku adeerkii wuu taageeri karaa si aan qabyaaladi ku jirin, laakiin waa haddii aad haysid sababo cad oo Illaahay kugu ogyahay oo aad kaga door bidaysid siyaasiga kale ee sharaxan. Haddii ay wacnaan lahayd in qabiil wax lagu doorto, Nuurkii ina abuurtay ayaa ina fari lahaa. Waa hoog iyo jab aad u badheedheysid, adduun iyo aakhiraba, in aad qof ku dooratid qabiil. Waa su’aal lagu weydiin doono maalinta dambe oo ay ka jawaabisteedu adkaan doonto.
F.G: Ugu horeyn akhriste ku mahadsanid wakhtigaaga qaaliga ah ee aad u hurtay akhrinta maqaalkan. Marka xigta aan ka afeefto in aanay ujeedada maqaalkani marnaba ahayn ceeb u samayn ama dhaliilid siyaasiyinta iyo xisbiyada aan ku magacaabay qoraalkan. Mid waliba wuxu iga mudanyahay xushmad iyo ixtiraam. Mahadsanid.